975nm 976nm 980nm 60W Fiber Diode Laser ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > diode လေဆာ 975nm 976nm 980nm 60W Fiber
diode လေဆာ 975nm 976nm 980nm 60W Fiber
975nm 976nm 980nm 60W Fiber Coupled Diode Laser သည် 105um fiber မှတဆင့် 60W output ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဤစီးရီးလေဆာရောင်ခြည် diode သည်အရွယ်အစားကြီးမားသည့် fiber-coupled packages များ၏သမိုင်းကြောင်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအရွယ်အစားကြီးမားသောစီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုတွင်အလွန်စိတ်ချရသောဒီဇိုင်းကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဤစီးရီးသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အထုပ်တွင်အားကောင်းသောနည်းပညာဆိုင်ရာအရည်အချင်းများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်ဖိုက်ဘာ - ချိတ်ဆက်ထားသောစုပ်စက် - လေဆာစျေးကွက်အတွက်ထူးခြားသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
975nm 976nm 980nm 60W Fiber Diode Laser ၏ ၁။ အကျဉ်းချုပ်
975nm 976nm 980nm 60W Fiber Diode Laser ၏ ၂။ နိဒါန်း
975nm 976nm 980nm 60W Fiber Diode Laser ၏ 3. အင်္ဂါရပ်များ
50W output ကိုပါဝါ;
105um ဖိုင်ဘာ core ကိုအချင်း;
975nm 976nm 980nm 60W Fiber Diode Laser ကိုအသုံးပြုခြင်း
975nm 976nm 980nm 60W Fiber Coupled Diode Laser ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ)
operating output ကိုပါဝါ Pout - 60.0 - W
ရရှိနိုင်သည့်လှိုင်းအလျား၏အတိုင်းအတာ λ 965 975 985 nm
ရောင်စဉ်တန်း width ကို FWHM @ Î” Î» - 4.0 7.0 nm
Pout မှာလက်ရှိလည်ပတ် IOP - 11.5 12.5 A
Pout တွင်လည်ပတ်နေသောဗို့အား VOP - 9.8 12.0 V
ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု - - 50 - %
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု η - 5.2 - W / A
ဖိုင်ဘာ core ကိုအချင်း DCOR - 105/125 - μm / μm
အမျှင်အရှည် Lf 0.9 1.5 - m
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပါယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 975nm 976nm 980nm 60W Fiber Coupled Diode Laser
၇။ ၉၇၅nm 976nm 980nm 60W Fiber Coupons Diode Laser ကို 975nm ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 975nm 976nm 980nm 60W Fiber Coupled Diode Laser, ထုတ်လုပ်သူများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူများ၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ Bulk, တရုတ်၊